Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Hindiya » IATO execs waji ka waji dowlada India
Wakiilada IATO waxay la kulmeen Wasiirka Maaliyada
Maanta, Mudane Rajiv Mehra, Madaxweynaha, iyo Mr. Pronab Sarkar, oo ah Madaxweynihii hore ee hore, ee Ururka Isutagga Dalxiisayaasha Dalxiiska (IATO), oo ah hay'adda guud ee dalxiisayaasha dalxiiska, waxay ugu baaqeen Hon. Wasiirka maaliyada, Mrs. Nirmala Sitharaman, xafiiskeeda.
Wakiilada IATO waxay la kulmeen si ay ugu mahadceliyaan iyada nadiifinta Adeegga Dhoofinta ee Hindiya (SEIS) ee loogu talagalay adeeg bixiyeyaasha.
Intaa waxaa sii dheer waxay uga mahadceliyeen fiisooyinka elektaroonigga ah ee dalxiiska ajnebiga ah ee bilaashka ah ee 5 lakh oo bilaash ah, iyo bixinta amaahda iyo inay dawladda ka raadsato taageero dheeraad ah soo noolaynta dalxiiska iyo xallinta arrimaha taagan.
Tani waxay si weyn u caawin doontaa howlwadeenada dalxiiska ee Hindiya inay la tartamaan dalalka deriska ah si ay u soo jiitaan dalxiisayaal badan oo Hindiya ah.
Arimaha lagala hadlay Mudane. Wasiirka ayaa hayn lahaa boqolkiiba SEIS Scrips oo ah boqolkiiba 7 taas oo la siiyay hawl wadeenada dalxiiska dhowrkii sano ee la soo dhaafay. Waxay xuseen in IATO ay codsaneysay in loo kordhiyo boqolkiiba 10, waana in lagu hayaa 7 boqolkiiba hadii aan la kordhin karin. Waxay sidoo kale yiraahdeen inaysan jiri doonin wax duubis ah, iyo SEIS oo loogu talagalay hawlwadeenada dalxiiska waa in lasii daayo iyadoon wax tanaasul ah boqolkiiba lahan.
Waxay sidoo kale kala hadleen Mudane. Wasiirka ayaa saameyn ku yeeshay cashuurta Alaabta iyo Adeegyada (GST) ee hawlwadeenada dalxiiska waxayna codsadeen in meesha laga saaro khalkhalkan iyadoo lagu dallacayo GST qiimaha loo arko taas oo noqon karta boqolkiiba 10 guud ahaan biilka guud ee hawlwadeennada dalxiiska. Tani waxay u oggolaaneysaa adeegga in lagu canshuuro 18 boqolkiiba calaamadda 10 boqolkiiba, taas oo macnaheedu yahay heerka wax ku oolka ah ee GST ee wadarta guud ee xirmada ayaa ka shaqeyn doonta boqolkiiba 1.8 ee guud ahaan biilasha hawlwadeenka dalxiis ee macmiilkiisa oo aan lahayn Wax Gal Amaahda Cashuurta (ITC). Waxaa sidoo kale la codsaday in GST iyo Canshuuraha Adeegyada iyo Canshuurta Adeegyada (IGST) in si buuxda looga dhaafo adeegyada laga bixiyo meel ka baxsan Hindiya, tusaale ahaan, dalalka deriska ah xitaa haddii xirmada ay ku jiraan Safarka Hindiya, maaddaama tani ay u keenayso khasaaro ganacsi ganacsadaha dalxiiska. Canshuur dhaafka dartiis, ballansashada ayaa imaan doonta howlwadeenada dalxiiska ee Hindiya halkii jaale noocan oo kale ah ay aadi lahaayeen howlwadeenada dalxiiska ee fadhigoodu yahay wadamada deriska. Tani waxay ku soo kordhin doontaa waddanka sarrif lacageed oo aad u tiro badan.
Arrinta kale ee la qaatay ayaa ahayd canshuuraha Canshuur Uruurinta laga helo Source (TCS) ee iibinta xirmooyinka dalxiisyada dibedda. Waxaa la codsaday in TCS aan laga dhigin mid lagu dabaqi karo dadka ama shirkadaha ajnabiga ah ee aan daganeyn dalxiisayaasha, dalxiisayaasha, ama dalxiisayaasha ajaanibta ah ee ku sugan banaanka Hindiya si ay uga iibsadaan xirmooyinka dalxiiska Hawl wadeen Hindi dalxiis loogu talagalay bannaanka Hindiya.